transform C: - MYSTERY ZILLION
my hardisk have2partation.c and d.
i install windows on C...
when next again to install windows, they already have been change.
like c is changedanddis already chang c..
what wrong with it??please ..
၀င်းဒိုးအသစ်တင်လိုက်လို့ Driver C: ကနေ Drive ကိုပြောင်းသွားတယ်။ အဲ့ဒါကို ကိုယ်ဖြစ်ချင် တာက Windows တင်ထားတဲ့အပိုင်းကို C: ဖြစ်ချင်တယ်။ Data ထားတဲ့အပိုင်းကို ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုပါတော့....
My Computer (Right Click) ----> Manage
> Disk Management ကိုနှိပ်လိုက်။ ညာဖက်အခြမ်းမှာ C: , စသဖြင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ C: (သို့) မှာ Right Click နှိပ် Change Drive Letter and Paths.. ကိုရွေး။ လက်ရှိ ရှိနေတာတဲ့ E: ကို အရင် Remove လုပ်။ ပြီးရင် ကိုယ်ထားချင်တဲ့ C: သို့ ကိုပြန်ရွေးလို့ရပါတယ်။ အခက်အခဲရှိနေသေးရင်.. Admin ိကိုကြီးများကို ဆည်းကပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
thank naw brother:D
but it's not easy like you said
because u know that windows C: is not accept to change any drive:
do u have any idea another ways??
ps:why it's change like this??
Partation Magic သုံးပြီးတော့ ကျနော်အဆင်ပြေဖူးတယ် ... PQ magic ဆိုပြီးဆိုင်တွေမှာမေးကြည့်လိုက်ရင် ရလောက်ပါရဲ့ step by step တော့ ကျနော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူး
အဲဒါ ပါတေးရှင်းလုပ်တုံးက D ဘက်ကို format မရိုက်ခဲ့ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ် .... ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးတယ် ဘယ်လိုလုပ်လုပ်မရဘူး .... နောက်ဆုံးမရတဲ့အဆုံး C ဖြစ်ကမဲ့ဟာကကို D ဖြစ်နေတယ် D ဖြစ်ကမဲ့ဟာက C ဖြစ်နေပြီး boot record တွေဘာတွေ အဲဒီဘက်မှာ ဖြစ်နေတယ် .... နောက်ဆုံး ၀င်းဒိုးပြန်တင်လိုက်ကတယ် ... ဒီအတိုင်း သုံးလဲစြဖ်ပါတယ် စိတ်ထဲက သိပ်မရှင်းတာနဲ့ ပြန်တင်လိုက်တယ်